H.E. U Soe Lynn Han Presents Credentials to His Royal Highness Grand Duke of Luxembourg – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
H.E. U Soe Lynn Han Presents Credentials to His Royal Highness Grand Duke of Luxembourg
U Soe Lynn Han, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Grand Duchy of Luxembourg, presented his Credentials to His Royal Highness Grand Duke Henri of Luxembourg, on 28 February 2019 in Luxembourg.
Dated.6March 2019
သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ အကြီးအကဲ မြို့စားမင်းသားထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် လူဇင်ဘတ်မြို့၌ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ အကြီးအကဲ မြို့စားမင်းသား အွန်နရီထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်